Budata FlyDrone APK maka Android
FlyDrone bụ egwuregwu nka enwere ike ịme na ekwentị gam akporo na mbadamba.
Onye nrụpụta egwuregwu Turkey MobSoft mere, FlyDrone bụ ụdị egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ. Negwuregwu ebe anyị na-ejikwa drone kama ịbụ agwa, karịa egwuregwu ndị ọzọ nke ụdị, ebumnuche anyị bụ ịgbalị ịga ebe kacha. Nime ogologo njem anyị, ọ nweghị ihe anyị ga-eme ma e wezụga ịnakọta ọla edo na imeri ihe mgbochi. Akụkụ kacha sie ike nke egwuregwu ahụ bụ na anyị na-aga ngwa ngwa site na mmalite. Nihi na drone na-aga ngwa ngwa, ọ nwere ike isi ike ịchịkwa.
Egwuregwu ahụ, nke jisiri ike dọta uche ya na nhazi ya mara mma, na-ewere ọnọdụ na ihe mgbochi siri ike. Ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ imeri ihe mgbochi nihi nhazi ya na-eme ngwa ngwa. Anyị kwesịrị itinye uche nke ọma noge egwuregwu niile ma mee njem anyị noge kwesịrị ekwesị. Nihi na anyị na-ejikwa ya site na ịpị, mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịkwụsị njikwa.
Mmepụta: MobSoft App.